Zimbabwe suspended from ICC with immediate effect – SLBC News ( English )
Zimbabwe suspended from ICC with immediate effect
ICC funding to Zimbabwe Cricket has been frozen, and representative teams from Zimbabwe will not be allowed to participate in any ICC events while under suspension, making Zimbabwe’s participation in the Women’s T20 World Cup Qualifier in August and the Men’s T20 World Cup Qualifier in October highly unlikely.
After several rounds of meetings in London this week, the ICC Board unanimously decided that Zimbabwe Cricket was in breach of the ICC Constitution, and that the actions of Zimbabwe’s Sports and Recreation Commission in suspending the board in June, constituted to government interference in Zimbabwe Cricket’s affairs.
Zimbabwe’s sanctioning marks the very first time a Full Member has been suspended by the ICC – although Sri Lanka were warned in 2015 that they were at risk of immediate sanction for government interference in their administration.
The ICC has directed that the Zimbabwe Cricket Board originally elected in mid-June be reinstated to office within three months, while progress in this respect will be considered again at the next board meeting in October.
The ICC wants cricket to continue in Zimbabwe, in accordance with the ICC Constitution.
← The Central Bank projects lending rates of Banks and Non-Bank Financial Institutions to reduce further in the immediate future
Postal services to return to normal by tomorrow →
Delhi Capitals won against Sunrises Hyderabad by 2 wickets in another play-off final stage matches played at Vishakapattanam in an exciting finish
May 9, 2019 Web Editor - AK	0